အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုပွဲစား 2019 | စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing - Binary Options ကိုအမျိုးအစားများ
binary options များပထမဦးဆုံးထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောအခါ, မသက်ဆိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာသူတို့ရဲ့ဒီဂရီ၏, သူတို့ကလူတိုငျးအတှကျအသုံးပွုဖို့ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ပြည့်စုံဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ရွေးချယ်မှုများအမျိုးအစားများသူတို့အားလုံးအတွက်သွားရဒွိဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ကြသည်။ သို့
ကျနော်တို့ (အသုံးအများဆုံး) binary options များအမျိုးအစားအားလုံးကြည့် ယူ. သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေမည်။
One Touch / အဘယ်သူမျှမထိ
နယ်နိမိတ် / Range
Long Term / က Short Term
အဆိုပါအဆင့်မြင့် / အနိမျ့ option ကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရှာတှေ့နိုငျရာ binary option ကိုအများဆုံးမကြာခဏအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်အဘယ်သို့ဤ option ကိုရွေးချယ်ခြင်းသောအခါအလုပျဖို့လိုအပျတဲ့အခြို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများစျေးနှုန်းပိုင်ဆိုင်မှု၏လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလ၏အဆုံးသဖြင့်ချင့်သွားပါသို့မဟုတ်လိမ့်မယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်အရေးအပါဆုံး variable ကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်များသောအားဖြင့်တက် 60 စက္ကန့်ကနေလာနေကြပါတယ်။ အခြားသူများကိုသင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေးခယျြပါစေနေချိန်မှာတချို့ကပွဲစားများ, သူတို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အများဆုံးခုနှစ်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန် 15 မိနစ်နှင့်နာရီပေါင်းများစွာအကြားနေကြပါတယ်။
ယင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်၏အဆုံးမှာပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းတက်, သင်သည်အမြင့် option ကိုပေါ်ရှိသင့်ပိုက်ဆံသွင်းထားပြီဆိုပါကရှင်းနေသည်မှာ, သင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုရှင်ဖြစ်ကြသည်။ , အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အမြင့် option ကိုရှေးခယျြခဲ့ပေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းမူရင်းစျေးနှုန်းထက်နိမ့်သွားသည်, တကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်လျှင်။
One Touch / No Touch ကို binary option ကို လုံးဝယခင်အမြင့် / အနိမျ့အမျိုးအစားထဲကနေ defers ရသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ option ကိုဤအမျိုးအစားအတွက်အချက်အချို့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်မရောက်မှီအဆိုယခုအချိန်တွင်အချို့စျေးနှုန်းရောက်ရှိဖို့သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါခလုတ်အမှတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အရေးကြီးအရာပိုင်ဆိုင်မှု "ထိတွေ့" ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ?? အဆိုပါအခြို့သောစျေးနှုန်း, ဒါမှမဟုတ် "မထိ" ပါဘူး ?? ထိုသို့ရွေးချယ်ထားသည့်ထားပြီးကားအဘယ်သို့လျှင်။
အဆိုပါကုန်သည်တစ်ဦးအနိုင်ရရှိအခြေအနေမှာအခါတစ်ဦးအမှု၌, အကျိုးကိုဘယ်လောက် "ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း" ပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ် ?? ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှတ်သို့ရောက်ရှိ (သို့မဟုတ်လက်လွတ်) အားလွယ်လျှင်, သင်တန်း၏, အကျိုးကိုပြောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
, အခြားတစ်ဖက်တွင်ကပိုင်ဆိုင်မှုအမှတ်မထိသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ခြင်းရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးလျှင်, အလားအလာဆုလာဘ်ပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။
Pair ကိုသင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်၏အဆုံးအားဖြင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုရပါလိမ့်မယ်အရာပိုင်ဆိုင်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ခွင့်ပြုသည့် binary option ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု A နှင့် B တွင်ရှိပါသည်ဟုပြောပါစေ
သငျသညျဂုဏ်ပြုလွှာထို့နောက်အမှန်ပင်ပိုင်ဆိုင်မှု B ကထက်ပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုဟာသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဦး၏အဆုံးအားဖြင့်ဆိုရင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်၏အဆုံးအသုံးပြုပုံပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်မှုခထက်ပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုရပါလိမ့်မယ်ဟုပြော - သငျအနိုင်ရ!
သငျသညျကံထဲကဖြစ်ကြပြီးပိုင်ဆိုင်မှု B ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုရပါလိမ့်မယ်ကပြောသည်လျှင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
အမြင့် / အနိမျ့ option ကိုအတူသင်စျေးနှုန်းနယ်နိမိတ်သို့မဟုတ် Range အတူသွားရလိမ့်မည်ဟုသောဦးတည်ချက်ခန့်မှန်းလို့ယူဆတယ်ကွေစဉျ, သင်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းသွားလိမ့်မည်သည့်အတွင်းတန်ဖိုးများသတ်မှတ်ထားနိုင်ကြသည်။
နိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံး: သင်နှစ်ခုခလုတ်အချက်များသတ်မှတ်ထားဖို့ထင်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားခလုတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ငွေရှာဖို့အဘို့အလို့ငှာ, မည်သည့်အချိန်တွင်မရောက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်သောတန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်။
သင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်နေထိုင်ရန်သင့်သောထဲမှာကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုရှေးခယျြပါလျှင်ရှင်းနေသည်မှာအန္တရာယ်အကျိုးဆက်တစ်ခုကျဉ်းအကွာအဝေးအဘို့, အကျိုးကိုပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။ အနိမ့်ကြလိမ့်မည်။
အားလုံး binary option ကိုကြိမ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ရှိသည်, ဤအတူ ထို binary option ကိုသငျသညျကိုမဆိုသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်မှအချိန်ကန့်သတ်နိုင်ကြသည်။ က Short Term ကုန်သွယ်ရေး, သဘာဝ, (သင်တန်း၏, သို့မဟုတ်အစာရှောင်ဆုံးရှုံး) အစာရှောင်ခြင်းအနိုင်ရနိုင်ရန်အတွက်လုပ်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရောင်းအများ၏အချိန်အပိုင်းအခြား 60 စက္ကန့်ကဲ့သို့အတိုကနေမိနစ်အနည်းငယ်မှကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရေရှည်အရောင်းအသငျသညျမိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အချို့သောအချိန်ရှိသည်နှင့်ဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရေးစောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်သူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ Long Term အရောင်းအရက်အနည်းငယ်ကဲ့သို့အနိမ့်အနေဖြင့်, လပေါင်းများစွာမှတက်မှကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်သည်များအနေဖြင့်ရှေးခယျြနိုငျသောများစွာသောထို binary option ကိုမျိုးရှိပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်မိမိတို့၏ရွေးချယ်မှုများပွင့်လင်းရှိသည်ဖို့ကုန်သည်များအတွက် လုပ်. , သူတို့ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ကုန်သွယ်လုပ်ပေးနေကြတယ်။
သင်တို့ပတ်လည်သင်၏ဦးခေါင်းခြုံဖို့အဲဒီ options လွယ်ကူသောတွေ့ရှိခဲ့လျှင်, binary ပွဲစားများပူဇော်သောအရာကိုထုတ်စစ်ဆေး, သင်ပွဲစားကုန်သည်များဖန်တီးသောဒွိရွေးချယ်စရာ ပို. ပင်ထူးခြားသောအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမည်!
Tags: အကောင်းဆုံး binary options များပွဲစားများ, ထို binary options များ, ထို binary options များပွဲစားများ, binary options များသရုပ်ပြအကောင့်, ထို binary options များဗျူဟာ, ထို binary options များကုန်သွယ်, binary options များအမျိုးမျိုး, binary options များအမျိုးအစားများ, binary options များမဟာဗျူဟာအမျိုးအစားများ, binary options များကုန်သွယ်အမျိုးအစားများ, binary options များဘာတွေလုပ်နေလဲ